Nolosha Oo Dhan Waa 3 Maalmood! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed, March 12, 2020
Shalay waa maalin tagtay oo aan kugu soo laabanayn waxii ay guul lahayd iyo khasaareba way tageen mana soo ceshan kartid
Maanta waa maalinta ugu qaalisan cimrigaaga waana raasamaalka ugu weyn ee aad haysato waana maalinta ugu qaaalisan noloshaada. Qiimaha noloshaada oo dhan waxay ku xeranyihiin saacadaha yar ee kuu jira maanta. Noloshaada qiimaheeduna waa waxa ay noqonaysaa sidda aad hadba ugu faa’idaysato oo keliya waayo manta markaad ka faaidaysato berrina waad ka faa’idaysan iyo cimrigaaga oo dhan. Laakiinse hadaad maanta lumiso beritana waad luminaysaa kadibna sidaas ayaad ku lumisay noloshaadii oo dhan. Waxaa la yirri “qofka maalintiisa lumiyaa berridiisana wuu lumiyaa”
Aad waa berri berriyina waa maalin maqan mana garan kartid waxa ay kuu sido waxay noqon inaad gaartay iyo in kale Alle (S.W.T) ayaa keligii og berri iyo waaayaheeda mana ahan inaad ku xisaabtanto waxanad garanayn wax ay noqon. Haddaad waa bariisato ha sugin inaad galabaysato hadii aad galabaysatana hasugin inaad waa bariisato waayo ma ogid inaad subbax leedahay iyo inkale, laakiin maanta ka dhig maalinta guushaada, camalkaaga iyo hawlahaagana u sameey sidda ugu wacan ee ugu quruxda badan hammigaaga iyo dadaalkaagana isugu geey saad maanta u guulaysan lahayd. Taasina waa sirta nolasha saraynta iyo farxada waxaa la yiraahdaa “qaamuuska kelmed keliya ayaa ku jirta, kelmadaasina waa hadda ama imminka macnihii waa daqiiqada aad hadda joogto oo keliya”.
Taasina waxa ay kuu cadaynaysaa inaad waxaad haysataba tahay daqiiqada aad joogto oo keliya qiimaha noloshaaduna 60 keeda second ku jiro iyo sida aad uga faa’idaysato. Waqtiga qiimihiisa in badanbaa diinteenu inagu boorisay. Carabtuna waxa ay ku maahmaahaan “qof waliba waa inta maalinta in ka badan inta uu yahay ina aabihii”
Xikmado iyo meelo badan oo diinteena ka mid ahba waxaa kaaga muuqanaya oo ay ina farayaan waa qiimaha waqtigu leeyahay inagana sidda inagu waajibka ah waa in aan ka faa’idaysanaa maalmaha nolosheena si aan ifka sharaf iyo cizzi ugu noolaana aaakhirana camal wacan oo ina anfaca aynu u shaqaysano waa inaad noqotaa qof noloshiisa iyo naftiisa toona aan faa’ido la’aanta iyo maalaa yacnigu boos ku lahayn oo aanay uga banaanayn.
Si hadaba aad u xaqiijiso arrintan waa in aad habeen kasta intaa aanad seexan xisaabtantaa oo xisaab xer ku samaysaa waqtigii aad maanta soo qaadatay iyo waxa aad kaga faa’idaysatay waa in aad ogaataa saacad walba iyo halka ay kaaga baxday waxa aad ku qabatay adigoo iskale mid dhigaya siddii nin meherad leh oo kale oo habeenkii xisaabinaya meheradiisa si uu u ogaado waxa uu faa’idaystay iyo waxa uu khasaaray iyo weliba waxa uu berri la shaqa tegeyo intaba.
Taasi waxay kuu fududaynaysaa inaaad ogaato waqtigaagii iyo sidda aad maanta ku qaadatay haddii net-ku kuu soo baxo guul aad baan kuugu hanbalyaynayaa waxaadna tahay qof noloshiisa guul ka jooga, haddii kalena waad khasaartay ee naftaada ku dhiiri geli in aanad dib u khasaarin oo aad khasaarahaga guul ku bedesho sida ugu dhaqsaa badan Allena (S.WT) tallo saaro keligii ayaa awood u leh inuu wax hagaajiyo.
Maskaxdaadina ku hay xikmada oranaysa “maalintaadu yaanay kugu dhaafin faa’ido la’aan maalkaagana ha dhigin wax ku qabad la’aan” waayo cimrigu wuu ka gaabanyahay inuu dhamaado faa’ido la’aan, maalkuna wuu ka yaryahay in la dhigo wax qabad la’aan.
Ogow oo ogow qofka caqliga badani suura gal kama ahan inuu waqtigiiisu maala yacni iyo faa’ido la’aan ku dhaafo maalkiisana ku lumiyo wax aan faa’ido lahayn iyo khayr toona.
Waa in aad uga faa’idaysataa waqtigaaga siddii qof berri dhimanaya oo kale adiga oo fulinaya wax kasta oo waajib ku saaran ah, ugana soo baxaya habka ugu haboon oona dhamaystiraya hadey cibaado tahay iyo haday camal aduunyo oo wacan tahayba. Kuna xisaabtan in markuu xasilo qaamuskaaga aakhiro uu qaamuskaaga aduunkuna isaga oo khasban kuu imanayo. Waxa cirka lagu gaaray waa waqti laga faa’idaystay iyo buuraha figtooda, badda gunteeda waxaas oo dhana waxaa kasii saraysa jannada fardowsa ee ku dadaal saad if iyo aakhiraba ugu guulaysan lahayd kana faa’idaysato daqiiqada aad haysato.
Previous post Maxay Tahay Sirta Ku Jirto Hoos U Dhigida Lacagta Shiinaha?